Display နှစ်ခု ဒီဇိုင်းနဲ့ ထွက်ရှိလာဖို့ရှိတဲ့ Vivo Nex2 – AsiaApps
ထူးခြားတဲ့ ဒီဇိုင်းတွေကို အမြဲဖန်တီးလေ့ရှိတဲ့ Vivo ဟာ အခု တစ်ခေါက်မှာလည်း ထူးခြားတဲ့ ဒီဇိုင်းတစ်ခုကို ဖန်တီးလိုက်ပြန်ပါပြီ။ Pop-up ကင်မရာလိုပဲ ဒီတစ်ခေါက် သူ့ရဲ့ ဖန်တီးချက်ကလည်း တော်တော်လေး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ တကယ်လို့ သင်က ထူးထူးခြားခြား စမတ်ဖုန်း သတင်းတွေကို စိတ်ဝင်စားရင် ဒီအကြောင်းအရာလေးကို ကျော် မသွားပါနဲ့နော်။
Image source: @VenyaGeskin1
Vivo ရဲ့ Nex စီးရီးအသစ် က မျက်နှာပြင်နှစ်ခု (dual-screen) ဒီဇိုင်းကို featuring ယူထားပြီး နောက်ဘက်ကင်မရာ ၃ ခု ပါဝင်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ Screen တစ်ဖက်ရဲ့ အပေါ်ဘက်မှာဆိုရင် မြင်ဖူးနေကြမဟုတ် ရှားပါးတဲ့ LED အဝိုင်းလေးကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Vivo Nex2ကို အခု ဒီဇင်ဘာလမှာ ထွက်ရှိလာဖို့ သတင်းတွေတော့ ထွက်နေပါတယ်။
Nubia X လိုပဲ Nex2ရဲ့ dual-screen ဒီဇိုင်းက ရှေ့ဘက် မျက်နှာပြင်ရဲ့ screen to body အချိုးအစားကို အမြင့်ဆုံးထိ မြှင့်တင်နိုင်ပါတယ်။ ဒုတိယ မျက်နှာပြင်ကို လိုအပ်တဲ့ အချိန်မှာ ထုတ်သုံးနိုင်ပြီး selfie (သို့) Video call ခေါ်ချင်တဲ့ အချိန်မှာ သူ့ကို အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Nubia X ပုံစံအတိုင်း ဆိုရင်တော့ နောက်ကြောဘက်ကော ရှေ့ဘက်ကော ၂ ခုလုံးကို အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ ရှေ့ဘက်မျက်နှာပြင်က အပြည့်ဖြစ်ပြီး နောက်မျက်နှာပြင်ကတော့ ကင်မရာ ၃ခုနဲ့ အပြည့်မဟုတ်ပါဘူး။ အောက်မှာ ပြထား တဲ့ဓာတ်ပုံထဲက ပုံစံ အတိုင်းပါပဲ။
နောက်တစ်မျိုး ထူးခြားတာက သူ့ရဲ့ Second screen မှာ RGB LED “Lunar Ring” လေးပါဝင်နေတာပါ။ အဲ့ဒီအဝိုင်းလေးကို ဓာတ်ပုံထဲမှာ ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရမှာပါ။ ကင်မရာအကြောင်း အသေးစိတ် specs ကိုတော့ သေချာမသိရသေးပေမယ့် Nex2 က အခု ၂၀၁၈ ခုနှစ် အစောပိုင်းက ရေပန်းစားခဲ့တဲ့ time-of -flight ပုံစံဖြစ်မယ်လို့ ကြားပါတယ်။
Pop-up ကင်မရာကတော့ မပါတော့ဘူးဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ကြားရပါတယ်။ ဒီဇိုင်းပုံစံက အခုတစ်ခေါက် နောက်ဆုံး ဒီဇိုင်းကို အတည် ဖြစ်နိုင်ချေရှိတယ်လို့တော့ မှန်းထားကြပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အခု ဒီဇိုင်းပုံစံက အရင်တုန်းကပေါက်ကြားထားတဲ့ ဒီဇိုင်းပုံနဲ့ နည်းနည်း ကွာပါတယ်။ ကျောဘက်က ကင်မရာ ၃ ခုက အလျားလိုက်နဲ့ ဒေါင်လိုက် ကွဲသွားတာပါ။ အောက်မှာ အရင်က ထွက်ထားခဲ့တဲ့ ဒီဇိုင်းပုံစံကို ပြထားပါတယ်။
ဒီဇိုင်းပုံစံ ကာလာ အနေအထားက ဘာမှ ပြောစရာမရှိအောင် မိုက်ပေမယ့် ဈေးနှုန်းကတော့ နည်းနည်း မမိုက်လောက်ပါဘူး။ Dual- display နဲ့ဆိုတော့ သေချာပေါက် ဈေးများမှာပါ။
ကဲ… ဘယ်လိုလဲ??? Vivo Nex2 ကို ကိုင်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိကြလား။ ဘော် ဘော်တို့ရေ??? ???)